जति कोसिस गर्दा पनि किन बच्चा बस्दैन ? कारण यस्तो हुन सक्छ एकचोटी अबस्य पढ्नुहोस् – ramechhapkhabar.com
जति कोसिस गर्दा पनि किन बच्चा बस्दैन ? कारण यस्तो हुन सक्छ एकचोटी अबस्य पढ्नुहोस्
उनि भन्छिन् ‘यस क्षेत्रमा काम गर्दा पाठेघर भित्र भएको ट्युमर फालेपछि महिलाहरु आमा बनेका उदाहरणहरु धेरै छन् । ‘उनका अनुसार थाहा नभएका कारणहरुमा विभिन्न पुस्तक र अनुसन्धानका अनुसार परिक्षण गरिसक्दा पनि गर्भ नरहेमा केहि समस्या उत्पन्न हुन्छ । तर यस्तो केशमा सुरुवातामा ओभुलुसन इन्डक्सन, औषधि र सुइबाट नै कोसिस गर्ने हो । यो प्रक्रृयामा ३ देखि ४ पटक गरेर पनि केहि भएन भने आई।ओ।आई गर्नुपर्छ । आई।ओ।आई पनि ३ देखि ६ पटक भन्दा बढि गर्नुहुदैँन । यदि यो प्रक्रृयाबाट पनि गर्भधारण भएन भने आइ।भि। एफमा जानुपर्ने हुन्छ ।